Alaab iibiyeyaasha caanaha Arnica Montana HPLC = 98% | AASraw
/ Products / R & D Reagents / Budada Arnica Montana
AASraw wuxuu ku yaalaa karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa amar guud oo ah budada Arnica Montana, iyada oo la raacayo xeerka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Budada Arnica Montana waa sunta sunta marka ay ku jirto tamar buuxa, laakiin waxaa loo isticmaali karaa sida boomaatada, jel ama kareemka maqaarka aan la jarjarin ama loo qaatay gudaha gudaha marka la barbardhigo guriga. Arnica wuxuu noqday mid ka mid ah dawooyinka ugu caansan daaweynta guriga loo isticmaalo dunida oo idil.
Arnica Montana video budada
Arnica Montana Calaamadaha asaasiga ah
Name: Budada Arnica Montana
Isticmaalka budada Arnica Montana
Magacyo caadi ah oo loogu talagalay Arnica Montanaare Mountain Daisy Mountain, Leopard's Mountain and Tobacco Mountain.
Qiyaasta budada xayawaanka ah ee Arnica Montana
Ma jiro qiyaasta daawada budada ee Arnica Montana ama qadar gaar ah oo lagu taliyey; waxaa jira qiyaaso kala duwan oo loo isticmaalo isticmaalo kala duwan. Qiyaasaha saxda ah waa in marka hore la falanqeeyaa xirfadlahaaga daryeelka caafimaadka, waana in aad had iyo jeer si taxadar leh u akhridaa calaamadda alaabta ka hor intaadan wax qaadin.
Argagixisada Arnica Montanais marka la qaato afka haddii aan lagu qasi karin qiyaasaha daaweynta guriga sida 30X ama 200D.
Digniin ku rid budada Arnica Montana
Homeopathy waa nidaam daawo taas oo ku saleysan waxa loogu yeero "caynkaas oo kale ah" mabda 'ahaan, taas oo ah walaxda dhabta ah ee keena calaamadaha qof caafimaad qaba waxaa loo isticmaalaa (qiyaaso aad u hooseeya) si loo daaweeyo calaamadaha isku midka ah ee qof jirran. Sidaa darteed, marka laga reebo guriga, daaweyntu waxay helaysaa wax tayo badan marka ay ka sii darayaan: 200C ayaa ka xoog badan qiyaasta 6C.
Arnica Montanacan waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu yareeyo xakameynta ka imaanaysa duulimaad ama dherer fog. Qofkasta oo si sahlan u qaloociya, wuxuu ku qanacsan yahay kartida Arnica Montana ee lagu yareeynayo midabtakoorka.
Si looga caawiyo ka soo kabashada dhaawacyada yaryar, qallafsanaanta ama qaliinka, Arnica Montanais waa in ay tahay daweyn kasta oo dawada. Haddii aad tahay qof boomer ah, firfircoon dhammaadka wiigga ama xirfadle xirfadle ah, waa jawaabta saxda ah ee dhaawacyada yar yar ee nolosha.
Sida loo iibsado budada Arnica Montana laga soo qaato AASraw